Ungaqala kanjani ukuthengisa e-Amazon ngezinto ezisesha kakhulu?
Ukuthatha imikhiqizo efanele ukuyithengisa ngempumelelo e-Amazon phakathi kwezinto ezisesha kakhulu kunesici esibaluleke kakhulu sokuphumelela kwebhizinisi kule ndawo emakethe. Ngokubaluleke kakhulu, akuyona i-no-brainer okukhethwa ngokuqondile komkhiqizo okwenza konke ngokuphumelela kwebhizinisi ngaphambi kwakho konke okunye. Ake sibhekane nakho - kungakhathaliseki ukuthi usebenza kanjani kahle futhi ulawula uhlu lwakho lwemikhiqizo e-Amazon. Uma ukhethe umkhiqizo ongalungile ohluleka ukuhlangabezana nezidingo ezinkulu zomuntu onenzuzo, akunakwenzeka ukuthi izinhlinzeko zakho zitholakale phakathi kwezinto eziningi ezisesheka kakhulu ze-Amazon ezithengiswa izinkulungwane zabathengi nsuku zonke. Yingakho kubalulekile ukuqonda - akufanele neze unganqikaze ukutshala isikhathi kanye nomzamo ekufuneni umkhiqizo ofanele ozofunwa kahle futhi odayiswa ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, yini eyenza umkhiqizo onenzuzo? Ngezansi ngizokubonisa uhlu olusheshayo olungcolile lweziphakamiso nezincomo ukuze uthole umkhiqizo omuhle ngokuqinisekile.
Inani lokugcina lomkhiqizo (ngokwesilinganiso)
Okokuqala, kufanele uthathe kalula - ibanga lentengo phakathi kwama-dollar angu-10 ukuya kwangu-50 indawo enhle kakhulu e-Amazon ukuthi izinto eziseshwa kakhulu zivame ukuthatha lapho. Kungani? Ngenxa yokuthi abathengisi bathi, abantu bangase bathathe izinqumo zokuthenga ngezikhathi ezithile lapho bebona amathegi wamanani ajwayelekile ikakhulukazi kulolo hlu. Esinye isizathu esilandelayo ukuthi izinto ezinjalo ezibi kakhulu cishe zilula, empeleni ngaphandle kokuningi, akunjalo? Phela, ukukhetha lesi sithintelo samanani aphansi kuyokwenza isinqumo sakho esenziwe kahle sokuqala ukungena emakethe.
Isisindo esibaluleke kakhulu
Sithathwe ngomqondo obanzi, ukukhetha isisindo somkhiqizo oqondile kuyinto ebaluleke kakhulu ukubona okunikezwayo ku-Amazon phakathi kwezinto ezifunwa kakhulu. Kepha mina, ngikholelwa ukuthi isisindo esingcono kakhulu sokunciphisa umkhiqizo wokuthutha phansi kufanele uhlale endaweni ethile ephakathi kuka 1.5 kuya ku-2.5 kilogram. Lokho ngokwemvelo kunquma ukulinganiswa okungaphezulu kwesiphakheji ngezindleko zokudiliza ezithengekayo.
Imikhakha yomkhiqizo ngaphakathi kwesiGungu esifanayo
Into ewukuthi ngokuvamile, kuwumsebenzi ongeke ukwazi ukuphatha ukuze uthole noma yikuphi ukulinganisela okucacile kumkhiqizo BSR ), Yebo ngaphambi kokuthi uqale ukuyithengisa. Kodwa lokho ongakwenza ngakho ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho omusha unamathuba afanelekayo okuthengiswa kahle. Ngakho-ke, ngincoma ukuba uhlolwe kabili kwimikhiqizo yesigaba esifanayo kanye nezikolo zabo ze-BSR. Kepha mina, ngingathatha inombolo engu-5,000 ye-BSR njengombundu wokuhlola izinto ezifunwa kakhulu ze-Amazon kwisigaba esifanayo esifanayo, noma imikhiqizo efanayo. Ukuze nje ususe izinto - kungukucabanga kwami ​​kuphela engisanda kuthuthukisa ngokusebenzisa umkhuba wami wokuthengisa e-ecommerce. Noma kunjalo, njengoba isikhathi sibonisiwe, isiphakamiso sisebenza.